Pollfish: Otu esi eziputa nyocha nke intaneti nke oma site na Mobile | Martech Zone
Created mepụta nyocha nyocha ahịa zuru oke. Ugbu a, kedu ka ị ga-esi kesaa nyocha gị wee nweta ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ ọnụọgụ ọsọ ọsọ?
10% nke nyocha $ 18.9 nke ahịa ijeri ụwa na-emefu na nyocha n'ịntanetị na US
Meela nke a karịa oge ị nọrọla na kọfị kọfị. Created mepụta ajụjụ nyocha, mepụta azịza ọ bụla – wee zuo oke usoro ajụjụ a. Mgbe ahụ ị nyochara nyocha ahụ, wee gbanwee nyocha ahụ. Then na-ekerịta nyocha ahụ na onye ọzọ maka nyocha ha, ma eleghị anya ị gbanwee ya ọzọ.
Yabụ ugbu a, ọ zuru oke. Kwesịrị inweta ọgụgụ isi nke ndị ahịa ịchọrọ, site n'aka ndị ịchọrọ iru. Naanị otu nsogbu – kedu ka esi ekesa nyocha gị ka ị ruo ndị ziri ezi?
You nwere ike ịnwale ikesa nyocha gị site na otu ụzọ ma ọ bụ njikọta nke usoro ndị a:
Nyocha ekwentị. Ma na mmadụ ole na ole n’ezie na-aza oku si na-amaghị nọmba, e nwere na-ebelata irè maka usoro a na dijitalụ afọ.
Ajụjụ ọnụ mmadụ na-ajụ. Ndị a na-eri oge, mana ha nwere ike ịdị irè. Can nwere ike nweta azịza miri emi ma tụọ mmeghachi omume na asụsụ ahụ, mana nke a na-egbochi nnabata gị na ndị na-ege ntị, usoro a dịkwa n'okpuru onye na-agba ajụjụ ọnụ.
Ntuli aka ndi mmadu nwere ike ịrụ ọrụ, mana ịnweghị ike ịjụ ọtụtụ ajụjụ, yana ị yikarịrị ka ọ bụ naanị ndị na-ege ntị nke ndị gị na ha jikọrọ.
Mgbasa ozi Gugul. You nwere ike kpọsaa nyocha gị site na AdWords, mana nke a nwere ike ịdị oke ọnụ, ebe ọ bụ na enweghị nkwa na ndị pịa mgbasa ozi ga-emecha nyocha ahụ. Alsokwesịrị ịdị ezigbo mma na ide ederede iji mee ka ndị mmadụ pịa mgbasa ozi ahụ, ịkwesịrị ịkọwa onye ọ bụla ọzọ maka isiokwu ndị yiri ya.
Survey nyiwe na-adị n'ịntanetị ma na-agakwuru ndị mmadụ site na email ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, ọhụrụ wepụtara Nyocha Google 360 - isi ihe mgbakwunye na nchịkọta Google Analytics-nwere ike iru ọdọ mmiri nke nde mmadụ 10 na-aza ajụjụ na ntanetị. Agbanyeghị, ngwungwu a pere mpe site na ndị na-ege ntị pere mpe ọ nwere ike iru (maka nghọta, nke ahụ bụ naanị 3% nke ndị bi na US).
Ga-achọpụta na ekwupụtaghị mobile na ndepụta niile dị n'elu. Ekwentị mkpanaka bụ mpaghara na-enweghị ikike maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, yana nyocha ahịa, ọkachasị, adịghị ngwa ịgbanwe usoro ya-maka ọtụtụ ebumnuche. Ndị ọchụnta ego na ndị ahịa dijitalụ na-amalite ịghọta njem ndị na-azụ ahịa gafere na mkpanaka, yana otu ha nwere ike isi jiri usoro ọhụụ a nwee mmekọrịta na mmekọrịta chiri anya karịa 24/7.
Site na iji ike nke ekwentị, ọgbọ na-esote nke ngwaọrụ nyocha nwere ike ijide ma nwee ọgụgụ isi na ngalaba ndị na-azụ ahịa, nke na-enye ndị azụmaahịa ohere ịwepụta ego ha nke ọma wee mepụta nsonaazụ ha chọrọ iji jeere ndị ahịa ha ozi kacha mma.
Tinye Akwukwo - Ntuziaka nyocha nyocha nke na-eweputa ihe omimi di omimi na ntaneti site na ngwa ngwa site na ngwa ngwa di iche iche. Na Pollfish, ị nwere ike itinye nyocha nyocha nke ahịa na-erute ndị mmadụ ebe ha na-anọkarị oge ha-na ekwentị mkpanaaka.
Pollfish na - ewe ụzọ dịtụ iche iji ruo ndị na - aza ajụjụ nyocha, ebe ọ na - elele ahụmịhe onye ọrụ yana chọrọ ịnye ndị na - eme nchọpụta ahịa ọgụgụ isi kachasị mma.
Nke a bụ ihe Pollfish na-eme n'ụzọ dị iche
Ọ naghị ewebata ma ọ bụ kwụọ ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ
Ọ naghị akwalite nyocha site na ọwa akwụ ụgwọ dị ka mgbasa ozi mmekọrịta, Mgbasa ozi Google, ma ọ bụ ndị mmekọ
Ọ naghị amanye ndị mmadụ ịza nyocha iji kpọghee ọdịnaya adịchaghị
Ọ naghị akwụ ndị na-aza ajụjụ maka nyocha ọ bụla, ma ọ bụ ozi aka
Ikekwe n'ụzọ na-akpali nnọọ mmasị, Pollfish nyochara netwọkụ nwere ihe karịrị nde mmadụ iri atọ na abụọ na ekwentị mkpanaaka n'ụwa niile-na ezigbo oge. Yabụ kedu ka Pollfish si enweta netwọọkụ nyocha kachasị n'ụwa?
Ikpo okwu na-enyere ndị nkwusa ngwa ahụ ike ịkwalite onye na-aza ajụjụ maka isonye n'otu ụzọ abụọ:
Ndị nkwusa nwere ike kporie ma nye ụgwọ ọrụ na ngwa maka nsonye
A zara ndị na-aza ajụjụ ka ha zaghachi nyocha ma banye n'ime random ịbịaru
Site n'iji usoro a, Pollfish enwetala ihe nchoputa nyocha nke 90% - kariri ogo ulo oru:
Pollfish na-enweta ndị nzaghachi kacha mma—Ha na-arụ ọrụ na ngwa a ma nwee nzaghachi dị elu ebe ọ bụ na mmetụta ndị ọzọ dị na mpụga anaghị adọpụ uche ha. Na mgbakwunye, ha enweghị mmasị ịfụ site nyocha maka ịkwụ ụgwọ n'ihi mkpali na-ezighi ezi. Ọ bụrụ na isiokwu ahụ adịghị adọrọ mmasị, ha na-apụ na ya ma laghachi na ngwa ha.
Pollfish na-enweta oge nzaghachi ngwa ngwa (olee otu 750 gụchara nyocha ajụjụ 10 n'otu ụda elekere?)
Pollfish na-enye ahụmịhe kacha mma,, ebe ọ bụ na ndị na-aza ajụjụ nwere ike ịme nyocha na mma ha, na ngwa, mgbe ọ dị ha ka ọ dị, na nyocha emere maka ngwaọrụ mkpanaka.
Yabụ, enwere ọtụtụ ụzọ iji kesaa nyocha gị, mana naanị otu nwere ike ịnweta gị ihe karịrị 320 nde na-enweghị usoro, ndị ọrụ na-amaghị aha ha ga-enye gị data ka mma na nghọta na isiokwu nyocha gị.
Tags: gamificationkporienyocha zuru ụwa ọnụmobile nnyocha e merenyochaonyinye ntuli akaazụ azụpollingụgwọ ọrụnnyocha e merennyocha e mere na netwọkụgwọ ọrụ nyochanyocha
Enwere m agụụ maka ịzụ ahịa, atụmatụ, teknụzụ, ịkọ akụkọ, na mmụta ndụ niile. Ihe ngosi nke ọrụ m na-ewetara ndị na-ege ntị anwansi nke teknụzụ. Achọpụtara m ka ụdị dị iche iche si ebi ndụ, ịiche ọdịiche, na njikọta site na ịkọ akụkọ ha na afọ dijitalụ. Dị ka VP nke Marketing, m nka bụ na-emepe emepe azụmahịa atụmatụ, na ekpede ika n'ọnọdu, nkwukọrịta nyiwe, n'ji nghọta, na ahịa njem gafee dijitalụ, na-elekọta mmadụ.
Mee 13, 2017 na 9: 02 AM
Ee ị kwuru eziokwu. Nyocha a na - eji agagharị agagharị ga - eweghara ozi karịa ụzọ ọdịnala ma ọ ga - elekwasị anya ndị ahịa ziri ezi karịa. Dika okwu ya, nweta nzaghachi n'uzo ohuru.
N'ezie ekwenyere m gị, Mgbasa ozi ọchụchọ Google, nyocha ekwentị, nyocha nke mmadụ, ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ usoro nyocha niile mana usoro a dị oke ọnụ ma ọ bụ na-ewe oge. nyocha a na-agbagharị agbagharị ga-elekwasị anya ndị ahịa ziri ezi na ndị na-ege ntị